Esplanade Analakely : Harodana ireo « pavillons » natsangan’ny CUA -
AccueilSongandinaEsplanade Analakely : Harodana ireo « pavillons » natsangan’ny CUA
Esplanade Analakely : Harodana ireo « pavillons » natsangan’ny CUA
06/02/2018 admintriatra Songandina 0
“Fananganana fotodrafitrasa tsy nahazoana alalana”. Izay no nilazan’ny teo anivon’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE) tamin’ny alalan’ny tale jeneralin’ny Fanajariana ny Tany eo anivony, Gerard Andriamanohisoa, ny mahakasika ireo “pavillons” natsangan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) etsy amin’ny Esplanade Analakely.
Nohazavain’ity tompon’andraiki-panjakana ity fa tao anatin’ny fotoana fohy, dia nirongatra be ny fampiasana tsy ara-dalàna ny fananam-bahoaka (domaine public). Tafiditra amin’izany ny lalan-kely, ny lalana, ny zaridainam-bahoaka, sns. Noho izany indrindra, fananam-bahoaka ny Esplanade Analakely ary efa voasoritra ho toeram-piantsonan’ny fiara (parking). Taty aoriana anefa, navadika ho lasa tsena.
Nambaran’ny tale jeneralin’ny Fanajariana ny Tany hatrany anefa fa tsy manara-dalàna avokoa ireo fanorenana tsena ataon’ny CUA eny amin’ireny fananam-bahoaka ireny. Tsy vitan’izay fa tsy misy na/sy manana fahazoan-dalana ahafahana manorina sy manangana akory ny CUA. Nohamafisin’ny teo anivon’ny M2PATE hatrany fa araka ny lalàna 2008-013 ao amin’ny andininy fahefatra “… ny fananam-bahoaka, na misoratra amin’ny Fanjakana na tsia, dia tsy azo amidy velively”. “Misy lalàna mifehy azy avokoa ireo fananam-bahoaka, eny fa na misoratra amin’ny Fanjakana izany na misoratra amin’ny kaominina”, hoy ny tale jeneralin’ny minisitera.
Tsy vitan’izay ihany fa ireo tsena rehetra natsangan’ny CUA eny amin’ireo toerana voatokana ho an’ny mpandeha an-tongotra (trottoir) sy eny amin’ireo lalam-bahoaka dia hotsoahina sy harodana avokoa, satria manelingelina ny fananam-bahoaka. Anisan’izany ny etsy am-pitan’ny Pochard Soarano, ny eny Anosibe, sns. Voakasik’izany koa ny manodidina sy manamorina iny zaridain’ny Farihin’Anosy rehetra iny.
Ny zaridainan’ny Farihin’Anosy, dia tafiditra indrindra amin’ny tetikasam-panavaozana, izay havadika ho toeram-pizahantany sy ho an’ny vahoaka ary harovana. Noho izany, harodana sy hesorina avokoa ireo kiôska rehetra natsangan’ny CUA hivarotana rehetra manamorona ny zaridaina. “Ny Farihin’Anosy, izany hoe ilay dobo no misoratra amin’ny CUA fa tsy ny zaridaina manoloana azy. Noho izany, tafiditra indrindra amin’ny fananam-bahoaka io zaridaina io ka tsy azo hananganana tsena sy hanatanterahana filàna tsy ara-dalàna”, hoy fanazavan’ny tale jeneralin’ny Fananan-tany, Hasimpirenena Rasolomampionona.
Marihina fa efa nampahafantarina tamin’ny alalan’ny antotan-taratasy mahakasika ireo fanorenana tsy ara-dalàna ireo ny teo anivon’ny CUA.